प्रहरी र विप्लप समूहबीच ‘क्लोज क्वार्टर कमब्याट’, भोजपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा
सुशासन : सुरक्षा/अपराध
असार २५, २०७६
काठमाडौं – बुधवार बिहान भोजपुरमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच दोहोरो भिडन्त भएको खबर सार्वजनिक भयो ।
भिडन्तमा प्रहरी जवान सञ्जीव राई र विप्लव समूहका ओखलढुंगा इन्चार्ज निरकुमार राईको मृत्यु भयो ।
भोजपुरको हटिया बजारमा विप्लवका केही कार्यकर्ता लुकिछिपी बसेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) नरबहादुर सलामी मगरका अनुसार सादा पोशाकमा प्रहरी जवान सञ्जीव राई, सोमनाथ भट्टराईसहित अन्य ३ जना प्रहरी ‘सर्च अपरेसन’को लागि त्यसतर्फ लागे । सँगसँगै प्रहरीको गस्ती टोली पनि थियो ।
हाटबजार भएकाले हटियामा आउने–जानेको बाक्लै भीडभाड थियो । प्रहरीले विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न खोज्दा लछारपछार पनि भएको मगरले बताए ।
‘विप्लवका कार्यकर्ताले प्रहरीलाई आएको देखेपछि फायर खोले, जवाफी कारवाहीमा हामीले पनि फायर खोल्यौं,’ डीएसपी मगरले लोकान्तरलाई भने ।
प्रहरी र विप्लव समूहका कार्यकर्ताबीच नजिकै (क्लोज क्वार्टर कमब्याट) बाट गोली हानाहान भएको र उनीहरूले प्रहरीलाई आक्रमण गरेको डीएसपी मगरले बताए ।
‘हामीलाई उनीहरू त्यस क्षेत्रमा आएको सूचना थियो । हामीले उनीहरूमाथि सर्च गरिरहेका थियौं । एक्कासी भेट भयो, हतारमा उनीहरूले फायर खोले,’ डीएसपी नरबहादुरले भने, ‘उनीहरू ५/६ जनाको समूहमा आएको सूचना थियो । अन्यको खोजी कार्य जारी छ । सुरक्षा निगरानी पनि बढाएका छौं ।’
घटनास्थलबाट चाइनिज पेस्तोल १ थान, म्यागजिन १ थान र ६ राउन्ड गोली पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङमा दरबन्दी भइ जिल्ला प्रहरी कार्यलय भोजपुरमा कार्यरत प्रहरी जवान सञ्जीव राईको कोखामा गाली लागेर मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरमा दरबन्दी भएका खेमनाथ भट्टराईको विप्लप समूह र प्रहरीबीच लछापछार हुँदा बायाँ कुम भाँचिएको छ । घाइते भट्टराईको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा
सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । भोजपुरका सबै नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले खोजी कार्य गरिरहेको भोजपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले लोकान्तरलाई बताए ।
‘अन्य विप्लप समूहका कार्यकर्ताको खोजीकार्य जारी छ । हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सबै जना खोजीको लागि खटाएका छौं भने अन्य अवस्था भने सामान्य छ,’ उनले भने ।
असार २५, २०७६ मा प्रकाशित
लोकान्तर संवाददाता अर्याल सुरक्षा/अपराध तथा समसामयिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन् ।
नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीद्वारा सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती
रुपन्देहीमा १० लाख युरोसहित ५ जना पक्राउ
अदालतमा जे देखियो : इजलासमै आलमले सोधे – यो न्यायाधीश कस्तो हो ?
सामान्य विवादपछि युवकको विभत्स हत्या
बोलपत्र च्यात्ने सात जना प्रहरी नियन्त्रणमा
तपोवनको ‘डेथ पार्क’ : मानव चेतनाको द्वार खोल्ने आनन्दमय स्रोत ! पूरा पढ्नुहोस
शी सफलताले जन्माएको प्रश्न : आर्थिक शक्ति मात्रै सार्ने कि विश्व व्यवस्था फेर्ने ? पूरा पढ्नुहोस
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब खोस्ने सर्वोच्चको फैसलाले ल्याएको तरंग पूरा पढ्नुहोस
भीआईपी पक्राउको सन्देश : ‘सानालाई ऐन ठूलालाई पनि अब छैन चैन’ पूरा पढ्नुहोस
९ हजार प्रहरीलाई कारबाहीमा परे मनिला- फिलिपिन्समा पछिल्ला केही बर्षमा नौ हजारभन्दा बढी प्रहरीलाई कारबाही भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । फिलिपिन्सको राष्ट्रिय प्रहरीले सन् २०१६ को जुन ३० देखि अहिलेसम्म ९ हजार १ स...
भारतमा उपनिर्वाचन : महाराष्ट्रमा ५४ र हरियाणामा ६५ प्रतिशत मतदान
पाँच किलो चरेससहित महिला पक्राउ
सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा
नेपाल र अष्ट्रियाबीच जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता
२० वर्षअघि आफ्नै बाबुलाई हत्या गरेर भाग्ने रतनकाजी पक्राउ